जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे ठुलो तपाईलाई प’छुतो हुनेछ ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे ठुलो तपाईलाई प’छुतो हुनेछ !
आइतबार सूर्य भगवानको पूजा गर्दा यो मन्त्र जप्नाले हुन्छ फलिफाप